जीवनशैली फेरौं: मनिषा कोइराला – HamroSamrachana
जीवनशैली फेरौं: मनिषा कोइराला
हाम्रो संरचना । १ बैशाख २०७४, शुक्रबार १७:१६
मैले सन् २०१२ मा मलाई क्यान्सर भएको थाहा पाएँ । त्यसपश्चात सबैभन्दा राम्रो ठाउँमा जचाएँ । अमेरिकाको सबैभन्दा राम्रो चिकित्सकबाट आफनो स्वास्थ्य जीवन फिर्ता लिएँ । तर, मेरो जीवनशैली परिवर्तन नगरेको भए म के असुरक्षित हुन सक्दिनथेँ ? के त्यो क्यान्सर फेरि बल्झन सक्दैनथ्यो ?
त्यसैले मैले क्यान्सरबाट के सिकें भने आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ हामी आफैंले हेर्नुपर्छ । किनभने स्वास्थ्य भएन भने हामीले जीवनको कुनै कुराबाट पनि लाभ लिन सक्दैनौं । हामीले गुणस्तरीय जीवन प्राप्त गर्न सक्दैनौं । यो कुरा मैले पाएँ । यो सिकेपछि मलाई जहाँ गए पनि, जहाँ बसे पनि स्वास्थ्यको महत्वबारे बोल्न मन लाग्छ । आफ्नो जीवनशैलीलाई स्वस्थ राख्नका लागि धेरै ठूलो कुरा गर्नुपर्दैन । बुझ्नलाई धेरै पर पनि जानु पदैन ।
सानो-सानो कुराहरुले हाम्रो स्वास्थ्यलाई ठीक राख्न सक्छ । जस्तो कि ८/९ घण्टा राम्रोसित आराम गर्ने, सुत्ने, पौष्टिक आहार खाने, व्यायाम गर्ने । व्यायाम भन्ने वित्तिकै जीममै गएर व्यायाम गर्ने मात्र हैन, हामी हिँड्न सक्छौ । सिँढीमा तलमाथि गर्न सकिन्छ ।
यो भगवानले बनाएको जीउ हो । यसलाई सक्रिय राख्न सकिन्छ । प्रशस्त मात्रामा पानीको सेवन गर्नुपर्छ । धेरै साना-साना कुरा गर्न सकिन्छ । एकैपटक ठूलै काम गर्नु पर्छ भन्ने जरुरी छैन । हामीकहाँ के पनि चलन छ भने नयाँ वर्षमा हामी ठूल्ठूला कुरा गर्ने प्रतिवद्धता त जनाउँछौ । तर, त्यसलाई लागु गर्दैनौ । त्यसैले, म के आग्रह गर्छु भने सानो-सानो परिवर्तन ल्याउनुहोस्, जुन तपाई वर्षभरि कायम राख्न सक्नुहुन्छ ।
र, हामी सरोकारवाला तथा नागरिकका तर्फबाट नीति निर्माणकर्तालाई हामी जवाफदेही बनाउनेछौं । स्वास्थ्य हामी हरेक नागरिकको एउटा अधिकार हो । हामीले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन जरुरी छ । साथै, यो हाम्रो पनि उत्तरदायित्व हो ।
म चाहन्छु, हामी सबैले यो सन्देश, यो कार्यक्रमलाई घरमा लिएर जाऔं । नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा हामी आजदेखि प्रतिवद्धता जनाऔं कि हामी स्वस्थ्य रहन्छौं ।
कोरोना संक्रमण बाट नेपालगञ्जमा शुक्रबार थप १ जनाको मृत्यु, एकैदिन २ हजार ७ सय २२ जनामा काेराेना संक्रमण
नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा १५ सय ५९ जनामा कोरोना संक्रमण